हबकूक2ERV-NE - “म एउटा प्रहरी - Bible Gateway
2 “म एउटा प्रहरी झैं उभिन्छु र हेर्छु।
परमप्रभुले मलाई के भन्नु हुन्छ म पर्खेर सुन्नेछु।
म प्रतिक्षा गर्नेछु अनि म जान्नेछु कि,
उहाँले मेरो प्रश्नको के जवाफ दिनुहुन्छ।”
हबकूकलाई परमेश्वरको जवाफ
2 परमप्रभुले मलाई उत्तर दिनुभयो, “तिमीलाई जुनकुरा दर्शाउँछु त्यसलाई राम्रोसित लेख। यो वचन सफा र प्रष्टसँग लेख कारण अरू मानिसहरूले पनि हेरेर पढ्न सकुन्।3यो समचार त्यो एउटा बिशेष भबिष्यको बिषयमा छ। यो समचार अन्तको समयको बिषयमा हो अनि यो सत्य हुन आउनेछ। यस्तो लाग्नेछ त्यस्तो समय कहिल्यै आउँनेछैन। तर धीरजसँग त्यसको समय प्रतिक्षा गर। त्यो समय आउनेछ त्यो आउन ढिलो लाग्ने छैन।4यो समचारले ती मानिसहरूलाई सहाएता गर्ने छैन जसले यसमाथि कान थाप्न अस्वीकार गर्नेछन्। तर धर्मी मानिसहरूले यो समचारमाथि बिश्वास गर्नेछन् अनि तिनीहरूलाई आफ्नो विश्वासको कारणले बाँच्न दिइनेछ।”
5 परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “दाखरसले मानिसलाई धोखा दिन सक्छ त्यस्तै प्रकारले एउटा शक्तिशाली मानिसको घमण्डले उसलाई मुर्ख बनाउँछ। त्यो मानिसले शान्ति पाउनेछैन। ऊ एउटा मृत्यु जस्तै हो, उसमे सधैँ धेरै-धेरै इच्छा गर्छ। मृत्यू झैं ऊ कहिल्यै पनि तृप्त हुँदैन। उसले अर्को देशलाई सधैँ हराई रहनेछ। उसले अन्य सबै राष्ट्रहरूलाई कैदी जस्तै लगिरहनेछ।6निश्चय नै यी मानिसहरूले उसको हाँसो उडाउँनेछन् अनि भन्छन्, ‘अर्काको धन खोसेर धनी हुनेलाई धिक्कार होस्, त्यसले कहिले सम्म त्यसो गर्छ? त्यसलाई धिक्कार होस् जो अर्काको धन खोसेर धनी हुन्छ।’
7 “हे, मानिस, तिमीले मानिसहरूको धेरै धन खोसेका छौ। जे जति भइरहेछ त्यसको विरोधमा एक दिन ती मानिसहरू उठ्नेछन्। उनीहरूले चाल पाउने छन् अनि तिम्रो विरोधमा खडा हुनेछन्। त्यस समय तिनीहरूले ती सबै कुराहरू तिमीबाट लिनेछन्। अनि तिमी भयभित हुनेछौ। 8 तिमीले धेरै देशहरू लुट्यौ। तर बाँकी रहेका जातिहरूले तिमीलाई लुट्नेछन्। तिमीले धेरै मानिसहरूको हत्या गर्यौ तिमीले खेतहरू र शहरहरू नष्ट पार्यौ र बासिन्दाहरूलाई मार्यौ।
9 “हो, जो मानिसले नराम्रो कर्मद्वारा धन कमाउँछ, उमाथि नराम्रो कुराहरू हुनेछ। सुरक्षासित बाँच्नको लागि उसले त्यसो गर्छ। उसले सोच्छ कि अरू मानिसले उसको धन लुट्न सक्दैन, तर नराम्रो कुरा उसमाथि घट्नेछ। 10 तिमीले धेरै मानिसहरूको सर्वनासको योजना बनाएर राखेका छौ। तर ती योजनाहरूले तिम्रो घरमा लाज ल्याउनेछन्। तिमीले दुष्ट्याईं गर्यौ यसकारण तिमाले तिम्रो जीवन गुमाउने छौ। 11 तिम्रो घरको पर्खालहरू तिम्रो बिरुद्धमा चिच्याई-चिच्याई बोल्नेछन्। तिम्रो घरका काठका खामाहरूले पनि तिम्रो दुष्ट्याईंको गवाही गिनेछन् कि तिमीले दुष्ट कार्य गर्यौ।
12 “ती दुष्ट शासकहरूलाई नराम्रो हुनेछ जसले निर्दोष मानिसहरूलाई मारेर शहरको निर्माण गर्छन् अनि दुष्ट्याईंद्वारा शहरहरू स्थापित गर्छन् तिनीहरूलाई नराम्रो हुनेछ। 13 सर्वशक्तिमान परमप्रभुले निर्णय लिनुभएको छ कि ती मानिसहरूले निर्माण गरेको शहरहरू सबै आगोले जलाएर खरानीमा परिणत गर्ने। तिनीहरूको सबै मेहनत बेकामको भएर जानेछ। 14 तब सबै तिर मानिसहरूले परमप्रभुको महिमा जान्नेछन् अनि यो खबर समुद्रमा पानी जसरी फिंजिन्छ त्यसरि नै फिंजिनेछ। 15 हाय! तिमीलाई हेर! जसले आफ्ना साथीहरूलाई तिनीहरूलाई धर्खराउन्जेल र चूर भई मातेर लडे झैं नहुन्जेल सम्म कुर्छौ र जब तिनीहरू नाङ्गो लड्छन् तब हेर्छौ।[a]
16 “तर त्यलाई परमप्रभुको क्रोधको बिषयमा ज्ञान हुन्छ। त्यो क्रोध विषको एउटा बोटुको समान हुन्छ जुन परमप्रभुले आफ्नो दाहिने हातमा लिनुभएको छ। त्यस मानिसले त्यो क्रोधको विष चाख्नु पर्छ। तब त्यो कुनै मातेको मानिस झैं मैदानमा लड्नेछ।
“हे दुष्ट शासक तिमीले विषको त्यो बोटुको पिउनेछौ। तिमीले इज्जत हैन लाज पाउँनेछौ। 17 लबानोनमा तिमीले धेरै मानिसको हत्या गरेका छौ। तिमीले त्यहाँ धेरै पशुहरू लुटेका छौ। तिमीले लवानोनमा गरको हिंसाले तिमीलाई अत्याउँनेछ। तिम्रो पशुहरू अनि मानिसको वृहत हत्याले तिमी भयले आघातित हुनेछौ। ती शहरहरू अनि त्यहाँका मानिसहरूलाई नराम्रो काम गरेकोले तिमी डराउँने छौ।”
मूर्तिहरूको विषयमा समाचार
18 उसका झूटो देवताले उसलाई बचाउँन सक्दैन। किनकि त्यो त एउटा मानव निर्मित मूर्ति मात्र हो, जो धातुले मोहरेर बनाइएकोछ। यसकारण मूर्ति निर्माण-कर्ताले यसबाट सहाएता पाउने अपेक्षा गर्न सक्तैन। त्यो मूर्ति बोल्न सक्तैन। 19 जसले एउटा काठको मूर्तिलाई भन्छ, “हे देवता जाग उठ!” उसलाई अत्यन्तै नराम्रो हुनेछ। त्यो मानिसलाई धिक्कार जसले एउटा ढुङ्गाको मुर्ति जो बोल्न सक्दैन त्यसलाई भन्छ, “हे परमेशवर! उठ, जाग।” त्यो मूर्तिले सहाएता गर्न सक्दैन अथवा मार्ग दर्शन दिन सक्दैन। मूर्ति सुन अथवा चाँदीद्वारा मोहरिएको छ, तर त्यसभित्र जीवन छैन।
20 तर परमप्रभु, मूर्ति भन्दा भिन्दै हुनुहुन्छ। परमप्रभु उहाँको पवित्र मन्दिरमा बस्नु हुन्छ। यसकारण परमप्रभुको सामुन्ने सम्पूर्ण पृथ्वी चुप बसेर उहाँप्रति सम्मान प्रकट गर्नु पर्छ।
2:15 हाय! … हेर्छौ जुन व्यक्तिले आफ्नो साथीहरूलाई दाखरसमा विष थपेर मताउँछ अनि तिनीहरूको नाङ्गो अवस्था हेर्छ त्यो अत्यन्तै नराम्रो हुनेछ। यसको खास अर्थ बुझ्न गाह्रोछ यो हिब्रू शब्द हो।